सुशान्तको अन्तिम केही घण्टा, के भएको थियो ? « THULOPARDA.COM
सुशान्तको अन्तिम केही घण्टा, के भएको थियो ?
अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको निधनको खबर कसैलाई विश्वास लागिरहेको छैन । उनको परिवार, साथीसंगीसँगै सिंगो बलिउड दुखी छ । तर, यो कसैलाई थाहा छैन कि उनले आत्महत्या गर्नुको कारण के थियो ? उनले आफ्नै प्राण लिनुको कारण खुल्छ वा खुल्दैन धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ । के भएको थियो सुशान्तको जिन्दगीमा अन्तिम केही घण्टा ? अब हामी यसको जानकारी दिँदैछौं ।
जे पर्दामा देखिन्छ, वास्तविकता त्योभन्दा टाढा पनि हुनसक्छ । गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘छिछोरे’ मा जिन्दगीबाट हार मानेको आफ्नो छोरालाई जीवनको दर्शन सिकाएका सुशान्त सिंह राजपुत स्वयंले यो कुरा भुले कि जिन्दगीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण यदी केही छ भने त्यो जिन्दगी नै हो । कसलाई थाहा थियो र १४ जून उनको जिन्दगीको अन्तिम दिन सावित हुनेछ ।
आइतवार विहान ६:३० बजे उनी उठे । साढे ९ बजे उनले अनारको जुस लिए र आफूलाई कोठामा बन्द गरे । साढे १० बजे उनका कुक लञ्चमा के लिने भनेर सोध्न गए । तर, सुशान्तले ढोका खोलेनन् । कुकु १२ बजे पुनः लञ्चका लागि सोध्न पुगे । तर, दोस्रो पटक पनि सुशान्तले ढोका खोलेनन् । कुकले निकै बेर ढोका ढकढकाउँदा पनि उनले ढोका खोलेनन् ।
करीब साढे १२ बजे सुशान्तकी बहिनीलाई फोन गरियो । सुशान्तले ढोका नखोलेको जानकारी पाएपछि उनी करीब ४० मिनेटमा बान्द्रा पुगिन् । उनले पनि सुशान्तलाई बोलाइन् तर कुनै जवाफ मिलेन । करीब दिउसो १:१५ मा चाबी बनाउने मान्छेलाई बोलाएर ढोकाको लक खोलियो । दिउँसो साढे ३ बजे उनलाई बीएमसीको कूपर अस्पताल लगियो, जहाँ ४ बजे उनलाई मृत घोषणा गरिएको थियो ।
दीपाश्रीलाई गाली गलौच नगर्न चलचित्रकर्मीको आग्रह
हास्यकलाकार तथा ‘छक्का पञ्जा’ सिरिजकी निर्देशक दीपाश्री निरौलाले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अभिनेता राजेश हमाल ‘महानायक’